Apple Garden Residence - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguAgita
Jabulela ukuhlala okuyingqayizivele kunye noxolo kwindlu yethu yelizwe losapho. Yakhiwe ekupheleni kwenkulungwane ye-19 le ndlu yamkelwa zizitiya ezinkulu ze-apile, iipere kunye necherry, ichibi kunye nehlathi kwindawo yayo yeehektare ezingama-75. Indawo yokuhlala yindlu yabucala ngokupheleleyo enendawo yokungena kunye nezinto eziluncedo. Ibonelela ngeeholide zokuphumla kwiintsapho ezinabantwana, izibini, amaqela amancinane abahlobo kunye nabangatshatanga ngokufanayo.
Le ndlu ikwanendlu eyahlukileyo:
Indawo yokuhlala ye-Apple imalunga ne-60 m2 ububanzi. Inegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlala eliluhlobo lwesitudiyo elinesofa, indawo yomlilo yokuphumla, kunye nekhitshi. Inegumbi lokuhlambela elinebhafu. Ingabamba abantu aba-3. Kuba indlu ineendonga ezingqindilili kakhulu siyakonwabela ukufudumala ebusika kwaye ehlotyeni yonke indlu inomoya opholileyo othandekayo. Sizama konke okusemandleni ethu ukuzinza kwindalo. Ngako oko ilinen yethu ihlanjwe ngaphandle kokuphucula i-industry ivumba, iikhemikhali, izithambiso, i-bleachers, njl. .
Ungonwabela iintsuku entlango okanye uzulazule nje ezigadini okanye uqubhe (qaphela: ichibi linzulu kwaye alibafanelanga abantwana abancinci, kodwa liyindalo kakhulu. Ulwandle olulungele abantwana kakhulu eBaltic Sea eKlapkalnciems luyimizuzu engama-20 nje ngemoto) kwaye uchithe iingokuhlwa zothando kumlilo wenkampu. Kuya kufuneka uchithe ubuncinci usuku, kodwa ngcono ngakumbi iintsuku ezimbalwa okanye impelaveki ukonwabela iziqhamo zegadi, uzikhethele ukutya okanye ukwenza ijam yakho yasekhaya, uhamba kwindawo entle, undwendwela ichibi elijikelezwe yimithi kunye neemvakalelo. ukucotha kwexesha. Wamkelekile ukuba ulobe echibini, ekwindla wamkelekile ukuba ukhethe amakhowa- siya kukuxelela apho iindawo ezingcono kakhulu ziphi- kwaye ebusika unokunqumla ilizwe lokutyibilika elwandle okanye utyibilize echibini elinomkhenkce (unikwe iqondo lobushushu. kakuhle ngaphantsi kothabatha ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho). Kungenjalo, singavuya ngakumbi ukukubamba ngobusuku nje ukuba usendleleni ejikeleze iLatvia okanye indawo ejikelezileyo, njengoko sibekwe ngokufanelekileyo kuhola weVentspils- indlela enkulu eya kunxweme oluseNtshona eLatvia, apho iLiepaja, I-Ventpils, iKolka okanye iPavilosta kunye nezinye iindawo zithandwa ngabantu basekhaya kunye nabakhenkethi ngokufanayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Agita
Ikofu, iti, iijam zeziqhamo ezenziwe ekhaya ezinencasa kunye nesonka zihlala zikufuphi kwisidlo sakusasa ebaleni okanye kwi-pergola. Uyakundwendwela iigadi kwaye ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka ungakonwabela ukudubula kweegadi okanye ukukha amacheri, amapere, iiapile kwaye ude uzilungiselele iijam zakho. Sinethala leencwadi leelwimi ezininzi kunye ne-wi-fi, iibhayisekile zokuhlola kunye nendlela yeenyawo enezitulo zokuhamba okuthe cwaka kweentaka ezibukeleyo ukonwabela indalo yasendle.
Sinenye indawo yokuhlala ekhoyo kwindlu yelizwe lethu - indawo yokuhlala yegadi yaseCherry kwaye sinokuhlalisa ukuya kuthi ga kubantu abayi-6 ngokulula kunye ne-10 kunye neebhedi ezongezelelweyo.
Ikofu, iti, iijam zeziqhamo ezenziwe ekhaya ezinencasa kunye nesonka zihlala zikufuphi kwisidlo sakusasa ebaleni okanye kwi-pergola. Uyakundwendwela iigadi kwaye ngokuxhomekeke kwi…